Famongorana kitapo avy amin'ny tahirin-jiro iray hidro-elektrika any Malawi - Ellicott Dredges
Ao amin'ny 2018 ny kaontin'ny Millennium Challenge of Malawi (MCA-M) dia nanome an'i Ellicott Dredges fifanarahana tendro ho famatsiana arina Ellicott Series 1270 Dragon® ho an'ny orinasa mpamokatra herinaratra Kapichira any Malawi.
Ny Millennium Challenge Corporation (MCC), masoivohon'ny governemanta amerikanina dia niara-niasa mivantana tamin'ireo tompon'andraikitra avy any Malawi nandritra ny taona maro lasa izay mba hametrahana fototra matanjaka ahafahan'ny rafi-pahefana ao amin'ny firenena mandrindra ny tenany amin'ny fotoana maharitra.
Ny ankamaroan'ny mponina ao Malawi dia miantehitra amin'ny herin'aratra izay loharanon'ny angovo voalohany. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, dia nitombo ny fananganana silt sy sediment ao amin'ny renirano Shire akaikin'ny vovo-javamaniry mpamokatra herinaratra miketrika Kapichira. Ny potika manimba dia nahatonga ny fihenan'ny rano mihena amin'ny valan-javaboary, mampihena ny habetsaky ny rano mety ho tafiditra ao, mametra ny herin'ny alohan'ny turbine an'ny rano. Ny dredge mpanapahana an'i Ellicott® 1270 dia antenaina hanampy hanatsarana ny famokarana herin'ny Kapichira amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny fahatsarana ao anaty fitoeram-panamboarana ary noho izany dia hampiakatra ny habetsaky ny rano fitahirizan-drano sy ny famokarana herinaratra.
Ny dredge suction vaovao nateraky ny finday dia natolotra vao haingana ho an'ny mpanjifa. Ny dredge dia feno boom amin'ny vatofantsika sy kalesin-doka lava iray izay natao hanatsarana ny fahombiazan'ny fandidiana.